ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): 2013
အတွေးခံစားမှု (၁) - ချစ်ပါ ၊ ဝေဖန်ပါ ၊ ယဉ်ကျေးပါ ၊ အသိမှတ်ပြုအားပေးပါ ..
Photo Credit: http://3219a2.medialib.glogster.com/media/20/20851c173dcef7f55f0e3223994ec3f526a507ec0c76adeaa495cfc6e8dda438/handshake.jpg
စိတ်ထဲဖြစ်လာတဲ့ ခံစားချက်လေးပါ .. ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းရာတစ်ခုကိုပြောကြပြီဆိုရင် အဲဒီအကြောင်းအရာကို အကျိုးအကြောင်းနဲ့ မဆွေးနွေးဘဲ ဆဲဆိုဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းသူတွေ များလွန်းပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ရေရေရာရာprofile မရှိ၊ ဘယ်သူမှန်းလည်းမသိ၊ ဘယ်ကမှန်းလည်းမရေရာဘဲ ဖွဖို့သက်သက် အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်နေသူတွေလည်းများပါတယ်... ။ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ပြောကြပြီဆိုရင် ဆွေးနွေးကြပါ ၊ ငြင်းခုံကြပါ ၊ ဖလှယ်ကြပါ ။ မိုက်ရိုင်းတဲ့လူတွေက ကုိုယ့်ခေါင်းဆောင်ကို ရိုင်းစိုင်းစွာပြောရင် သူပြောတဲ့အချက်ကိုပဲ မယဉ်ကျေးနိုင်ရင်တောင် ပုံမှန်လေးပြန်ပြောလိုက်ပါ... ။ ကုိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုထိရင် နာတတ်တာ ၊ စိတ်မြန်မြန်နဲ့ တုံ့ပြန်တတ်ကြတာ လူ့သဘာဝမို့ နားလည်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထိန်းကြဖို့ လိုပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ဆဲဆိုခြင်းတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့... ။ ကျွန်မတို့ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဆဲဆိုဖို့ ၊ ပြန်လည်ရိုင်းစိုင်းဖို့ မမှာထားပါဘူး... ။
ဒုတိယအချက် - ကျွန်မတို့ ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင် ပိုပြီးကောင်းမွန်လာအောင်၊ အောင်မြင်လာအောင် ဝေဖန်အကြံပြုရင် မနေ့တစ်နေ့ကမှ “အမေ အဖေ”ခေါ်လာတဲ့ လူတွေက နှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ခံသူတွေထက်တောင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်အောင်ဖြစ်ကြပြီး မဆိုင်တဲ့ပါစင်နယ်တွေနဲ့ ဆဲဆိုလာကြတယ်..။ ဒါဟာမရိုးသားသလို ဘယ်သူ့အတွက်မှ မကောင်းပါဘူး ... ။ လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ရင် အဲဒီလူတစ်ယောက်ကို အားပေးမြှောက်ပင့်ခြင်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပြီး မစဉ်းစားမဆင်ခြင်သူတွေကို လေးစားလို့ မရပါဘူး .. ။ အားပေးရမယ်၊ ထောက်ခံရမယ်၊ ၀ိုင်းကုညီရမယ်၊ လိုအပ်တာကိုလည်း ဆွေးနွေးထောက်ပြနိုင်ရမယ်။ ကျွန်မတုို့ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျွန်မတို့ ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင် အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်စွာ ဝေဖန်တာတွေကိုလည်း နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်.. ။ ဒါမှ ကျွန်မတို့ချစ်တဲ့လူတွေဟာပိုအောင်မြင်လာမှာပေါ့... ။
တတိယအချက် - ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်ဆိုရင် သူ့အတိုင်းအတာနဲ့ သူအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း၊ ပါတီကိုမှ ရွဲ့စောင်းပြောဆိုခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်း ၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဝေဖန်ခြင်းတွေ မလုပ်စေချင်ပါဘူး ...။ လူဆိုတာ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့ ကောင်းတာလေးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနေချိန်မှာ “အသိမှတ်ပြုခြင်း”ခံရရင် စိတ်ကြည်နူးအားတက်လာပါတယ်.. ။ အားတက်လာရင် စေတနာပိုဖြစ်လာပြီး ပုိုလုပ်ဆောင်ပေးချင်စိတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်ခုခုမှားရင်လည်း “မဖြစ်သင့်“တာကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးကြ၊ ပြောကြ ၊ တင်ပြလို့ရပါတယ်။ ကောင်းတာလေးတွေ နည်းနည်းလေးပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်လုို့ အပြစ်ထိုင်ပြောကြစတမ်းဆိုရင် ကျွန်မတို့ကုိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်နေကြသူတွေအားလုံးရော နိုင်င်ငံအတွက်မပြောနဲ့ ၊ မိမိရဲ့ မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာတောင် တာဝန်တွေကျေကြပါသေးရဲ့လားလုို့ မိမိကုိုယ်မိမိ ပြန်မေးခွန်းထုတ်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောလို့ ကျွန်မကိုမေးလာရင် အဖြေရှိပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ဘာတာဝန်မှ မကျေသေးပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ြဖစ် ၊ ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ၊ အများပြည်သူအကျိုးအတွက် ကောင်းတာလေးတွေ နည်းနည်းလေး လုပ်နေရင်တောင် အသိမှတ်ပြုပါ ၊အားပေးပါ ၊ ဝေဖန်အကြံပြုပါ ၊ ဆွေးနွေးကြပါ။
အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ အလကားရတဲ့ အွန်လို်င်းစာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်မှာ ရိုင်းနေမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီသမားပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ စစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရိုးရိုးပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အတန်းအစားတူညီနေမှာပါ … ။
ပညာရှင်ဆန်သော ၊ ယဉ်ကျေးသော အသိုင်းဝိုင်းကို လူချင်းမမြင်ရတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း မိမိမှစတင် အတူတည်ဆောက်ကြရအောင်နော် :)
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:50 PM0comments Links to this post
Labels: My Opinion, Myanmar, Strongly Suggestion
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:14 AM 1 comments Links to this post
မြင့်မြတ်သော သာသနာ … တိုးတက်ရန် အရှိန်ယူဆဲ မြန်မာပြည်
ဘုန်းဘုန်း ဦးဝီရသူ အတွေးအခေါ်တွေကို သဘောမတူပေမယ့် Time မဂ္ဂဇင်းမှာ ဒီလိုမျက်နှာဖုံးကြီးနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားယောင်ယောင် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံကပဲ အကြမ်းဖက်နေသလိုလို ပါလာတော့ ကိုယ် ယုံကြည်မြတ်နိုးလေးစားလိုက်နာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ရော ၊ နိုင်ငံအတွက်ရော စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတာတော့ အမှန်ပါ ... ။ Time Magazine ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ရေးသားဖော်ပြချက်ကိုလည်း လက်မခံနိုင်ပါ .. ။ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ သာသနာအပေါ် ချစ်ခင်ကာကွယ်ချင်စိတ် “ရည်မှန်းချက်”ကို လက်ခံပါတယ် . ။ “နည်းလမ်း”တွေကိုသာ သဘောမတူတာပါ .. ။ ဦးဝီသူရအတွေးအခေါ်ကို သဘောတူသူ ၊ သဘောမတူသူ ကွဲပြားတာဟာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မမှားပါဘူး .. ။ ကျေးဇူးပြုပြီး မည်သည့်ဘုန်းဘုန်းကိုမှ ရိုင်းပျစွာ မပြောဆိုပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် . ။
ကျွန်မအမြင်မှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ၂မျိုးကွဲနေတယ်လို့ မြင်မိတယ် . ။ တစ်အုပ်စုက ဘာမှထွေထွေထူးထူး သိပ်မစဉ်းစားဘဲ မိမိဘာသာအတွက် အစွမ်းကုန် ကာကွယ်သော “အစွန်းရောက် ချစ်တတ်သူများ”အုပ်စု .. ။ သူတို့ကို သဘောမကျပေမယ့် အကြမ်းဖက်သမားလို့ မသုံးစွဲရက်ပါ .. ။ နောက်တစ်အုပ်စုက အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ချင်သူတွေပါ .. ။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအရ ၊ မျိုးစောင့်ဥပဒေ အချက်တွေကို သဘောတူလားလို့ မေးရင် ကျွန်မ သဘောမတူပါဘူးလို့ ဖြေရမှာပါ .. ။ အကြောင်းပြချက်က
- တည်ထောင်ကာစ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆူပူလွယ်သော ဘာသာရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့ ဥပဒေကောင်းတွေ သိပ်မရှိပါဘူး .. ။ လွတ်လပ်စွာ ထင်ရာမြင်ရာ ပြောဆိုရေးသားနေကြတာတွေက အထိမ်းအကွပ်မဲ့နေချိန် နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် .. ။
- ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရသော ၊ သံသရာလွတ်မြောက်ရာ တရားဓမ္မပါ .. ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ချုယ်ချယ်ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသလို အမိန့်အာဏာတွေနဲ့ ဖိနှိပ်ထားခြင်းလည်း မရှိပါဘူး .. ။ ဗုဒ္ဓ မသတ်မှတ်ထားတာတွေ ကျွန်မတို့ သာမန်လူတွေက စည်းမျဉ်းတွေဆွဲ သတ်မှတ်လိုက်ရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ အေးချမ်းသော ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ အာဏာဆန်သွားမှာပေါ့ .. ။
ဒီလို ဆန့်ကျင်သော စကားတွေပြောနေပြီး မိမိသာသနာကို ကာကွယ်ရန် ဘာမှမပြောတော့ဘူးလားလို့ မေးလာခဲ့ရင် ကျွန်မရဲ့ အတွေးက သာမန်ခပ်ရိုးရိုးလေးပါပဲ .. ။ သာသနာအဓွန့်ရှည်ဖို့ ကျွန်မတို့ရဲ မြန်မာကလေးတွေကို ငယ်စဉ်ဘ၀ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို သင်ကြားပြောဆိုပေးရမှာပါ .. ။ ရုပ်ထုရှေ့ ဒူးတုပ်ထိုင်ပြီး ဆိုချင်ရာဆိုနေတယ်လို့ ထင်နေသူတွေ … မှန်ကန်သော သစ္စာတရားကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် လုပ်ဖို့က တရားပြသူ ၊ သင်ကြားပေးသူတွေမှာ တာဝန်အပြည့်ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို နည်းနည်းလေ့ကျင့်ရင် များများစိတ်ချမ်းသာရတာကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမှန်စင်စစ်လေ့လာသူတွေဟာ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်မှ ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ ကျွန်မ မထင်ပါဘူး။
လောကီလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သုံးသပ်မြင်ရရင် …. ချုပ်ချယ်တားဆီးထားခြင်း မရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ၊ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ တုပ်နှောင်ထားသော ဘာသာတရားနှင့် ယှဉ်ရင်တော့ “ကိုးကွယ်သူ အရေအတွက်”မှာ အားနည်းချက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘုန်းဘုန်းတွေဘက်က စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ ကြံဆောင်လာကြတာလို့ နားလည်မှုပေးလိုက်ပါတယ် .. ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်အရ စိုးရိမ်မှု မရှိပါ .. ။ မှန်ကန်သောသစ္စာတရားဟာ ဖန်တီးမှုမှ မဟုတ်တာ … ။ လူတွေဘယ်လိုကြံကြံ ၊ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် “နည်းလမ်းကျသော ၊ လက်တွေ့ကျသော ၊ မပြောင်းလဲ မဖောက်ပြန်သော အမှန်တရား”ဆိုတာ အမြဲထာဝစဉ် ထွန်းလင်းနေမှာပါ .. ။
အဆုံးသတ်အတွေးလေးက … ဒဏ်ရာတွေဗလပွနဲ့ အမိမြေ ရှင်သန်လာအောင် ကြိုးပမ်းနေကြချိန်မှာ တစ်ချိန်က စစ်အာဏာရှင်ကို ကျွန်မတို့ ဘာသာမတူ ၊ မွေးဖွားရာမတူသူတွေအားလုံး လက်တွဲရင်ဆိုင် တော်လှန်ခဲ့ကြတာတွေကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေလိုပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ရှေ့မှာ “တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော အမိမြေ ပုံရိပ်” စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ဒီပုံရိပ်ကို အားလုံးလည်း မြင်တွေ့နေကြပါတယ် .. ။ ဆူးတွေနင်းထားတဲ့ ဒီလမ်းမကြီးကို ဖြတ်သန်းပြီး အသက်သွေးတွေလည်း အများကြီး ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ .. ။ ကဲ .. ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေ မတူညီပေမယ့် နိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ တူညီသော ချစ်စိတ်တွေနဲ့ ကျွန်မတို့အားလုံး အချင်းချင်း လေးလေးစားစား ဆက်ဆံရင်း ဆက်လျှောက်လှမ်းကြပါစို့ … ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:28 AM 1 comments Links to this post
Labels: Articles, My Opinion
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:32 PM 1 comments Links to this post
သွားချင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို တုပ်နှောင်စေတယ် .. ။
ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ယိုင်နဲ့စေတယ် .. ။
ကိုယ့်ဆန္ဒတွေကို နောက်ပို့လိုက်ရတယ် .. ။
စိတ်လွန်ဆွဲပွဲကို သရေပွဲနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်ရတယ် .. ။
အိပ်ပျက်ညတွေအလယ်မှာ ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ရတယ် .. ။
တောင်ပံမဲ့ငှက်တစ်ကောင်လို ရှင်သန်ရတယ် .. ။
အဖြေထုတ်ရခက်ဆုံး ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်လို အမြဲတ၀ဲလည်လည် ..... ။
Sat, 11th May 2013
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 4:01 PM0comments Links to this post
Invitation to Myanmar Literature Talk in Singapore - 20 Jan 2013
You are cordially invited to Myanmar Literature Talk by Ko Min Ko Naing, Ko Jimmy & U Win Phay in Singapore. Please support by buying the tickets with SGD$15 each. Tickets can be purchased at Ya-Nant Thit & Mya Nan Nwe in Peninsula Plaza. Appreciate your kind support.
Date: Sunday, 20 Jan 2013
Time: 01:00 pm to 07:00 pm
Venue: Agora Hall, Republic Polytechnic
9 Woodland Ave 9, Singapore 738964
Ticket: $15 in Ya-nant Thit or Mya Nan Nwe in Peninsula Plaza
Ko Bo Bo Win (Ya-Nant Thit) @ 8361 2244
Ko Phoe Sain @ 9062 3239
Ma Khaing Zar Min @ 9018 4427
Ma Ei Ei Aye @ 9168 2037
Ma Eaindra @ 9648 7667
Ma Chit Kyi Aye @ 9003 3804
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:25 PM0comments Links to this post
အတွေးခံစားမှု (၁) - ချစ်ပါ ၊ ဝေဖန်ပါ ၊ ယဉ်ကျေးပါ ၊ ...
မြင့်မြတ်သော သာသနာ … တိုးတက်ရန် အရှိန်ယူဆဲ မြန်မာ...
Invitation to Myanmar Literature Talk in Singapore...